Muxuu yahay codsiga Farmaajo u gudbiyay Madaxweynaha Congo? | Berberanews.com
Home WARARKA Muxuu yahay codsiga Farmaajo u gudbiyay Madaxweynaha Congo?
Muxuu yahay codsiga Farmaajo u gudbiyay Madaxweynaha Congo?
KINSHASA-(Berberanews)-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay tagay magaalada Kinshasa ee caasimadda Jamhuuriyadda Diqomraadiga Congo ayaa la kulmay madaxweynaha waddankaas Felix Tshisekedi.
Labada madaxweyne ayaa la sheegay inay ka wada hadleen xoojinta xidhiidhka labada waddan sida ay sheegtay warbaahinta dawladda Soomaaliya.
Waxay kaloo warbaahinta dawladda Soomaaliya sheegtay inay ka wada hadleen doorka muhiimka ah ee Midowga Afrika u ka ciyaaro horumarka Afrika.
Dhinaca kalena, madaxtooyada DRC ayaa sheegtay inay labada madaxweyne ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed iyo amni ee Soomaaliya.
Madaxtooyada DRC waxay sheegtay inay labada madaxweyne yeesheen wadahadalo socday muddo laba saacadood ah. Waxay sheegtay in madaxweynaha Soomaaliya uu ka codsaday madaxweyne Tshisekedi in isagoo ciyaaraya doorkiisa madaxeynaha Midowga Afrika inuu fududeeyo islamarkaana dusha kala socdo wadaxaajood dhexmara saamilayda Soomaaliya.
Waxay sheegtay in madaxweynaha DRC uu soo dhoweeyey soo jeedinta madaxweynaha Soomaaliya inuu Midowga Afrika u furo dhammaan Soomaalida sidii loo gaadhi lahaa xal iyo nabad waarta.
Sidoo kale wasaaradda arrimaha dibedda Soomaaliya ayaa xaqiijisay codsiga Farmaajo.
Qoraal kasoo baxay wasaaradda oo lasoo dhigay twitter ayaa lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu yidhi “Dowladda federaalka ayada oo tixgelineysa dadaallada Soomaaliya ay ku qabaneyso doorashooyin loo dhan yahay, nabdoon oo waqtigooda ku dhaca, dowladdeyda waxay soo dhoweeneysaa in Midowga Afrika uu kaalin ka qaato fududeynta hanaan Soomaali ay hoggaamineyo, Soomaali-na ay leeyihiin oo hoggaamin kara wada-hadallo.”
Maaxweynaha DRC waa Guddoomiyaha Midowga Afrika ee sannadkan.
Previous articleBerbera: Sariibado cusub oo loo dhisay Ganacsatada caanaha
Next articleNigeria oo ciidamo u soo dirtay dalka Somalia